Industry News abanini zifektri, abaxhobisi - China Industry News Factory
Iqela UNjingalwazi Ma Jun liyayichaza inwebu ungcolisa indlela womxhuzulane-eziqhutywa ceramic ndizayo product
Ngokutsho Heilongjiang Daily News, April 13, 2019, ilindle iye amanzi ecacileyo, amanzi olwandle iye amanzi acocekileyo, kunye nemvula sele amanzi acocekileyo. Izazinzulu ziye egxininisa zophando lwezenzululwazi, nondiliseko-oluqhutywa yodongwe technology inwebu ukuhluza iyindlela ebalulekileyo technical ...
Isimo shishino ezingaphiliyo ndizayo ceramic
Uphando China kunye ongokusetyenziswa kwethekhinoloji inwebu yodongwe yaqala emva kwexesha kakhulu. Ngo-1990, i-Chinese Academy of Sciences, i-University of Science and Technology of China kunye Nanjing University of Chemical Technology kunye namanye amaziko ophando lwezenzululwazi-kwinqanaba eliphezulu a ...
indlela bokusebenzisa film lokucoca
Le inwebu kufuneka zihlanjwe ngenxa yokuncipha ekubhobhozeni ngenxa ezinokosulela ndizayo. 1. Umgaqo jikelele zokucoca inwebu kukuba izinga eliphezulu flow, uxinzelelo phantsi, yaye ivelufa kwicala kubusa kufuneka zivalwe. Ngokubanzi, iindlela zokucoca inwebu bavame ihlelwa neAlemete emzimbeni ...
Nano nama ndizayo System , Ultrafiltration System Water Treatment , ndizayo Ongaphiliyo, esibamba Wosenza Fiber ndizayo , Micro nama ndizayo , Tubular inwebu yodongwe ,